Nghọta Ejiji na Egwu Coronavirus nke Dr. Wolfgang Wodarg? : Martin Vrijland
Nghọta Ejiji na Egwu Coronavirus nke Dr. Wolfgang Wodarg?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 19 March 2020	• 6 Comments
isi mmalite: wodarg.com
Wolfgang Wodarg bụ dọkịta German na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka SPD. Dị ka Onye isi oche nke nzuko omeiwu nke Kọmitii Ahụike nke Council nke Europe, Wodarg bịanyere aka na mkpebi nke chọrọ na Disemba 18, 2009, nke a tụlere na mkparịta ụka mberede na Jenụwarị 2010. Ọ kpọkwara oku ka e mee nchọpụta banyere ebubo metụtara ụlọ ọrụ ọgwụ na-akwadoghị iwu na-ahụ maka mgbasa ozi H1N1 zuru ụwa ọnụ na World Health Organisation.
Coda coronavirus ọzọ
Dr. Wodarg kwuru na enwere akụkọ banyere akụkọ akụkọ "Akwa edidem ikenyeneke ọfọn̄N’ime onye ọ bụla anwaghị anwa kwuo na eze ukwu ahụ eyighị uwe. Onweghi onye kwenyesiri ike ịhụ nke a; ewezuga obere nwa. Onye ọ bụla pụtara ịdaba na nrụgide ndị ọgbọ.
O yikarịrị ka a ga - ewepu ozi a dị ka ozi adịgboroja site na mgbasa ozi ndị na - agbasa ma ọ bụ ọbụna Facebook na-akatọcha kpamkpam. Ka Facebook ọ ga - ahapụ ozi a? Aga m egosi gị ihe kpatara m ji akọwa ya na edemede nke edemede.
Kọmunist na-ahụ maka teknụzụ
N'okpuru ọchịchị ọchịchị Kọmunist n'ọdịnihu, naanị otu akụkọ ka ị ga-anụ. Mgbe ahụ ị ga-ege ntị n'eziokwu mmanye nke ndoro-ndoro ọchịchị. Na usoro ọchịchị Kọmunist dị ugbu a na-agbasa ngwa ngwa, n'okpuru pretext nke coronavirus, anam akọwa nkọwa ya isiokwu a.
Na uto m, anyị na-ahụ ihe mmekọrịta dị n'etiti ndị isi ụwa niile nke ntiwapụ nke Coronavirus bụ PsyOp (ịwa ahụ akwara) iji mebie akụ na ụba ma mezuo ebumnuche m setịpụrụ isiokwu ahụ kọwaa. Nke ahụ ọ pụtara na coronavirus adịghị? Ee e, ma eleghị anya coronavirus ahụ dị adị. Agbanyeghị, nke ahụ anaghị ewepu na ọ nwere ike ịbụ nke ejiri mmụọ mepụta bioweapon. O nwekwara ike imebi ihe ojoo na-emebi ya.
Anyi na-ahụ ka ekpughere ‘Master script’ m kọwara n’akwụkwọ m. Ugbu a ị hụla na m buru ọtụtụ amụma ziri ezi, ọ bụ oge ịtụfu izu nke iche echiche izu oke ma mara n'ezie 'isi edemede', ka i wee hụ ihe na - eme ma ugbu a gaa n'ihu, ịnwere ike were ọnọdụ iguzogide. N’akwụkwọ m ebuola amụma na a ga-enwe oria ojoo ọzọ dị ka nke a. Biko gụọ akwụkwọ ahụ wee gụchaa n'okpuru njikọ a mgbakwunye na akwụkwọ ahụ.
Ite mmanụ a ,ụ, mmegide a na-achịkwa
O nwere ike ịbụ na Dr. Wodarg ka ebugara iji bupụta ụda dị oke egwu (lee vidiyo dị n'okpuru); ụda dị oke egwu nke na-emetụ eziokwu ahụ kpamkpam, mana ịma ụma gosipụta ọnụ ọgụgụ na-ezighi ezi, nke mere na enwere ike iwepụ ya ka ọ bụrụ akụkọ ụgha. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịme ntinye akwụkwọ mgbasa ozi na webụsaịtị dịka martinvrijland.nl nwere ike imechi (ọ bụrụ na m ga-abanye n'ime ya). A na-egwu egwuregwu ahụ n'ụdị ọkaibe a.
Nzube nke atụmatụ ahụ? Gbalịa ime ka mmadụ niile kweta na ihe ọ bụla na-abụghị isi akụkọ mgbasa ozi bụ isi akụkọ ụgha.
A na-akpọ usoro a 'atụmatụ mmanụ a'ụ'; atụmatụ nke ọrụ dị iche iche na-esi ọnyà site na ịgwakọta eziokwu 95% na ozi na-ezighi ezi na ịmalite ya (onwe) site na pawn (mmegide na-achịkwa). Ya mere enweghị m ike iji nke doro anya 100% ma akụkọ Dr. Wolfgang Wodarg bụ ọnụọgụ ziri ezi. Enwere m ike ịnabata echiche nke m. Nwere ike ịchọta nghọta ndị a na weebụsaịtị na akwụkwọ m.
Ka o sina dị, ọ bụ ihe mmụta ka ị rịba ama banyere ụdị mmegide 'mmanụ a honeyụ mmanụ a'ụ'. Ga-anụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eziokwu, mana ọ ga-eji obere adịgboroja merụọ ya, nke mere n'ikpeazụ, a ga-atụpụ nwatakịrị ahụ na mmiri ịsa ahụ.
Coronavirus COVID-19 oria ojoo: nje, bioweapon ma obu hoax maka idozi ego na njikwa ego?
Martin Vrijland nwalere ihe dị mma maka coronavirus covid-19
Tags: aan, ọzọ, obodo, coronavirus, Dr., agba, ọ dịghị, uda, nwere, hyia. ihe, eze ukwu, uwe, uwe, politburea, psyop, teknụzụ, Wodarg, Wolfgang
21 March 2020 na 10: 18
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ọ bụrụ na ị na-ele anya na Netherlands) nọ n'otu peeji. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri, ha niile na-ekere òkè na hype. Ihe dị iche bụ naanị na ịbịaru nso ebe ndị otu dị n'aka nri na aka ekpe chọrọ mkpọchi ngwụcha ya na ndị otu aka na-agafe agafe chọrọ mgbachi agafeghị oke. Mana na isi ha niile nọ na nkata ahụ wee sonyere ha niile. otu a na-emetụta ndị mgbasa ozi, onweghị onye ga-enwe obi abụọ ma nje corona dị njọ yana ma usoro ndị ahụ abụghị ikwubiga okwu ókè (dịka ọmụmaatụ 1000x).
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị nọ na NL (ikekwe karịa ka anyị chere) ndị nwere obi abụọ ma ọ bụ belata nke ukwuu na ihe na-eme, Jensen ekpokọtara maka nke ahụ. Jensen nwere ike ijide ndị obi abụọ na ndị na-ekwenyeghị na ya, ọ nwere ike mezuo ọrụ "honeypot" na Netherlands maka ndị na-ekweghị.
Gịnị mere ndị mmadụ ji eme ihe a? Jensen na-ekwu ọtụtụ eziokwu na pọdkastị ya, mana n'ezie mmiri ịsa oyi na-abịa mgbe ọ na-egosi ihe kpatara ụwa ji akpọpụta coronavirus: Ọ na-ekwu na ọ bụ n'ihi na a ga-emerịrị Trump, na n'ihi na "Ezigbo" (ya bụ, mgbochi globalism) na-emeri. na nke a aghaghi aghaghari ya rue na iwepinye aka nke ochichi aka ike iji luso Corona agha.
O wee jide ndi obi ojoo na ndi n’enyeghi ya ziga ha n’ime ohia.
21 March 2020 na 10: 51
Jensen bụ akara ikpeazụ ọ ga - enwerịrị ịgaru ndị na - agụ akwụkwọ na Vrijland. Naanị ọ na - ere Trump dịka dike. Ee e, edewo m ya kemgbe ọtụtụ afọ: ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile site n'aka ekpe ruo aka nri bụ ihe mkpuchi dị iche iche na otu ihu. Jensen akpọtụghị m aha. O nweghi onye na-anwa anwa na-ekwu maka m na akwụkwọ m. Nke ahụ bụ ihe kacha enye ha nsogbu.
21 March 2020 na 11: 02
O di nwute, otutu ndi mmadu n’aru “ududo ahihia”.
21 March 2020 na 13: 08
Eleghi anya ndi n’ekwu nzi nwere ike hapu ihe n’ego na uzo ochicho nke jensen na uzo websaịtị a. Ikekwe, a ga-eji nlezianya wepụ ihe ndị ahụ niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga - ekwe omume mgbe ụfọdụ na ụfọdụ ga - akwụsị ebe a.
Azụ isi dere, sị:
21 March 2020 na 11: 39
Odi nmaBabylon dere, sị:
21 March 2020 na 12: 16
N'ikwu okwu banyere mmegide a na-achịkwa, Jensen abụghị otu n'ime ha
" Otu esi eme ihe banyere usoro coronavirus (mkpọchi): ndụmọdụ bara uru
Mụta ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme na mkpọchi coronavirus na-abịanụ »
Nleta nile: 1.405.044